Inqubomgomo yobumfihlo | component-zu.com
1. Ukusetshenziswa kokuqukethwe kwesayithi
Iwebhusayithi iyaligodla ilungelo lokuhumusha okuqukethwe kwaleli sayithi kanye nokuqukethwe yileli sayithi ukuze uzisebenzisele wena wedwa. Okuqukethwe okuqukethwe yilungelo lobunikazi nezinye izaziso zobunikazi, kufanele uhlonishwe futhi kugcinwe ikhophi. Uma okuqukethwe kwesayithi ngaphandle kwesitatimende esifanele, akusho ukuthi isayithi ayinamalungelo, akusho ukuthi lelo sayithi alifuni amalungelo, futhi kufanele uhloniphe umgomo wokuthembeka kanye nezintshisekelo ezisemthethweni zokuqukethwe ukuze zisetshenziswe ngokusemthethweni. Awukwazi nganoma iyiphi indlela ukuguqula, ukukopisha, ukubonisa obala, ukushicilela noma ukusabalalisa izinto ezinjalo noma ukuzisebenzisela noma yiziphi izinjongo zomphakathi noma ezentengiso. Vimbela noma iyiphi yalezi zinto kunoma iyiphi enye iwebhusayithi noma enye imidiya yokuphrinta noma imvelo yekhompyutha yenethiwekhi. Okuqukethwe kusayithi bese uhlela indlela yokuvikelwa okungokomthetho ngumthetho we-copyright, noma ikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kungaba i-copyright, uphawu lokuhweba namanye amalungelo asemthethweni. Uma ungamukeli noma wephula le Migomo, ukugunyazwa kwakho kokusebenzisa isayithi kuzonqanyulwa ngokuzenzekelayo futhi kufanele uchithe ngokushesha noma yiziphi izinto ezilandiwe noma eziphrintiwe.
2. Iwebhusayithi yokusabalalisa imininingwane
Ukutholakala kokuqukethwe kuleli sayithi ngaphandle kwanoma iyiphi indlela yesiqinisekiso. Akuqinisekisi ukunemba okuphelele nokuphelela. Isayithi emikhiqizweni, kubuchwepheshe, ezinhlelweni, entengo nasabelweni kuzoshintsha ngaphandle kwesaziso. Okuqukethwe kwesayithi kungenzeka kuphelelwe yisikhathi, i-Component-en.com. Akukho ukuzibophezela kokuzivuselela. Ukukhishwa kolwazi okunamandla kungenzeka kusendaweni yangakini kusengakwazi ukuthola umkhiqizo, inqubo noma insiza, ungafaka isicelo koxhumana nabo beComponent-en.com Business kanye nomsabalalisi.
Ngaphezu kokuhlinzekelwa ubumfihlo, ngaphandle kwalezo, uthumela noma uthumele noma yikuphi ukwaziswa kusayithi, noma imininingwane yokuxhumana (ngemuva kwalokhu ebizwa ngokuthi ulwazi) izothathwa njengokungeyona imfihlo futhi okungeyona eyokuphathelene. Ukusebenzisa kwakho leli sayithi ngeke kwephule imithetho, imithethonqubo kanye nokuziphatha komphakathi, kungathunyelwa noma kuthunyelwe ngeposi noma kuthunyelwe noma yikuphi okungekho emthethweni, okusongelayo, okuthukayo, okwehlisa isithunzi, okuyihlazo, izithombe zocansi noma enye into engekho emthethweni. Uma abantu benolwazi lokuqukethwe kanye nomthelela kunobufakazi besixwayiso noma ukuphikiswa kwaleli sayithi zizwe ukhululekile ukususa umyalezo noma ukumiswa okungenamkhawulo kolwazi isiphequluli seWebhu, ngaphandle kokuthola imvume ngaphambi kwesikhathi, asikho isibopho sokuthumela isaziso, isimo kubucayi, leli sayithi lingasuswa kumsebenzisi.
4. Abasebenzisi bashintshana ngokuqukethwe
IComponent-en.com Phila ukuqapha noma ukubuyekeza umsebenzisi ukuthumela noma ukuthumela imiyalezo noma ukuxhumana kuphela ngolwazi lomunye nomunye kunoma iyiphi indawo yokubophezeleka, kufaka phakathi kepha kungagcini kumagumbi okuxoxa, Izinkundla ze-Component-en.com noma ezinye izinkundla zabasebenzisi, nanoma yiziphi ukushintshaniswa kokuqukethwe.Component-en.com Okokuqukethwe kwanoma yikuphi ukushintshaniswa okunjalo akuthathi noma yimuphi umthwalo wemfanelo, noma ngabe kubangela ukwehliswa isithunzi, ubumfihlo, amanyala, noma ezinye izinkinga.Component-en.com Igcinwe lapho kutholakala ukususa kufanele kuthathwe njengokuqukethwe okuhlukumezayo, okwehlisayo, okuyihlazo noma okunye okungafaneleki kolwazi.
5. Indawo yokulanda isoftware oyisebenzisayo
Uma ulanda isoftware usebenzisa i-software ukuze uthobele isivumelwano selayisense ye-software ukuletha yonke imigomo yelayisensi ye-software. Lapho ufunda futhi wamukela isivumelwano selayisense ye-software ngaphambi kokuthi izinhlinzeko zingalandi noma zifake isoftware.
6. Izixhumanisi kumawebhusayithi wesithathu
Ukuxhumanisa kwesayithi kumawebhusayithi wesithathu kuphela njengokulula kuwe. Uma usebenzisa lezi zixhumanisi, uzoshiya isiza.Component-en.com Ayikabuyekezi noma yimaphi amasayithi wesithathu, lawa masayithi nokuqukethwe kwawo akulawuli, ngaphandle kwesikweletu. Uma uthatha isinqumo sokufinyelela kunoma yiziphi izixhumanisi eziya kumasayithi enkampani yangaphandle, imiphumela yazo engaba khona nezingozi ezithwalwa nguwe.
7. Umkhawulo Wezikweletu
IComponent-en.com Futhi abahlinzeki bayo noma umuntu wesithathu okukhulunyiwe akanacala nganoma imuphi umonakalo (kufaka phakathi kepha kungagcini kuzinzuzo ezilahlekile, idatha elahlekile noma ukuphazanyiswa kwebhizinisi okubangelwe ukulimala), noma ngabe lowo monakalo uwukusetshenziswa okufanele, noma awukwazi ukusebenzisa Iwebhusayithi, kanye nokuxhumeka kwesayithi kunoma iyiphi iwebhusayithi noma yiluphi ulwazi oluqukethwe kulawo masayithi abangelwe, futhi noma ngabe banayo leyo nkontileka, ukuhlukunyezwa noma esinye isisekelo sezomthetho kusengaphambili futhi lokhu kube ngumonakalo onjalo kungahle kube nezeluleko. Uma usebenzisa leli sayithi ngenxa yolwazi noma idatha edingekayo yokugcinwa kwemishini, ukulungisa noma ukulungisa, kufanele wazi ukuthi ezabo kumele zithwale zonke izindleko ezivela lapho.Component-en.com Esimweni sezimo ezilandelayo ngaphandle kwesibopho: ukudluliswa kolwazi ngumhlinzeki wesevisi yenethiwekhi (Component-en.com. Futhi nomuntu ogunyaziwe) ngaphandle kwalowo oqalisiwe; ukudluliswa kolwazi, umzila, ukuxhumeka kanye nokugcinwa kunikezwa inqubo edingekayo yokuzenzekelayo yobuchwepheshe, ukukhethwa komhlinzeki wesevisi yolwazi; ngaphezu kwezinye izidingo zokuphendula okuzenzakalelayo, umhlinzeki wesevisi yenethiwekhi akabakhethi laba bahlinzeki bemininingwane nabamukeli; uhlelo lokuhlinzeka ngezinsizakalo zenethiwekhi noma umxhumanisi wenethiwekhi noma ukugcinwa okwesikhashana kwekhophi yolwazi lefomu, ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, hhayi umuntu ngaphandle komamukeli ohlosiwe othole isikhathi esinqunyelwe isikhathi eside kunomamukeli ohlosiwe wokunikeza ukufinyelela kokudluliswa kolwazi, ukuhanjiswa noma ngokuxhuma ngesikhathi esifanele; ngokusebenzisa uhlelo noma ukudluliswa kwenethiwekhi kokuqukethwe kwemininingwane kuphelele.
8. Izimiso ezijwayelekile
IComponent-en.com Ingashintsha le migomo nganoma yisiphi isikhathi. Kufanele uvakashele leli khasi ukuze uqonde imigomo yamanje, ngoba le migomo ihlobene kakhulu nawe. Izinhlinzeko ezithile zale migomo zingaba kumakhasi athile ngezaziso zomthetho eziqokiwe noma imigomo efakwe esikhundleni.